'सिटिजन युके' सार्वजनिक
प्रकाशित : शनिबार, जेठ ११, २०७६०९:११
संगीत । गीतकार अग्निप्रसाद केदेम लिम्बुको गीति एल्बम सिटिजन युके सार्वजनिक गरिएको छ । ललितपुरमा रहेको रेडियो बिएफबीएसमा शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच गीतकार डा. कृष्णहरि बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा एल्बम ‘सिटिजन युके’लाई सार्वजनिक गरिएको हो । रेडियो बिएफबीएसमा लाइभ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. कृष्णहरि बराल, सङ्गीतकार महेश खड्का, गायक दिपक लिम्बु, गीतकार अग्निप्रसाद केदेम लिम्बु, रेडियो बिएफएसका स्टेशन म्यानेजर बिनोदध्वज खड्कालगायतले एल्बम विमोचन गरेका हुन् ।
तुलसी बस्नेतले सहजीकरण गरेको विमोचन कार्यक्रममा अतिथिहरुले एल्बममा रहेका गीत राम्रा रहेको बताउँदै गीतकार अग्निप्रसादलाई तथा एल्बममा जोडिएका सबैलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । उक्त अवसरमा रमेश थापालगायत एल्बममा जोडिएका सबैलाई प्रमुख अतिथि डा. कृष्णहरि बराले मायाँको चिनो प्रदान गरेका थिए ।
सुटिङको फुटेज नै चोरी !
‘साइँली’ को ट्रेलरमा गाउँले प्रेम (भिडियो)
उपाध्यायका एक उपन्यास र तिन एल्बम सार्वजनिक
आरसी र पवित्राको ‘मायाको चिनो’ सार्वजनिक (भिडियो)
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ पुगे सलिन , सलोन र मलिका